Vorona - Wikipedia
Ny vorona dia ao amin'ny kilasin'ny biby manana taolan-damosina, ny Aves.
Izy ireo dia manana ra mafana ary manana atody. Feno volom-borona ny tenany ary manana elatra. Ny volom-borona dia manana asa telo, ny fisidinana, ny famehezana ny mari-pana ary ny fampisehoana. Manana taolana poak'aty ny vorona hahakely ny lanjany.
Noho izy ireo mafana vatana, dia mampiasa hery betsaka izy ireo. Noho izany, dia mihinana sakafo be dia be ireo raha oharina amin'ny lanjany.
Karazam-borona samihafa mihoatra ny 9000 no efa fantatra.
Ny vorona dia hita ao amin'ny kaontinanta rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ny karazam-borona samihafa dia afaka miaina amin'ny tontolo mangatsiaka, ary ny hafa dia afaka miaina ao amin'ny toe-tany mahamay. Ny vorona dia hita anaty ala, amin'ny kijana, amin'ny harambato tarehy, amin'ny sisin-drenirano, ny vato amoron'ny ranomasina, amin'ny zana-tsipìkany sy ny tampon-trano.
Mihinana sakafo isan-karazany ny vorona isan-karazany. Mihinan-kena ny ankamaroan'ny vonona ary mihinana nofon-kena izy ireo. Maro ireo vorona mihinana bibikely na trondro. Mihinana karazam-bibilava na voalavo na koa karazam-borona hafa izy ireo. Misy vorona hafa ihany koa mihinana fatim-biby. Ireo biby toa ny boloky dia mihinana voa ary voankazo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vorona&oldid=990633"
Voaova farany tamin'ny 6 Mey 2020 amin'ny 20:24 ity pejy ity.